Kusejusa kwandakaitwa na Bamkuru, sisi vasipo – VanodaZvinhu
“Ndokuitirai coffee here bamukuru” ndakabvunza apa time yakanga yakunanaira pana 8pm tichangopedza kudya supper.
Sisi vakanga vaenda ku Mesina that very day kuma 6pm kunotenga hembe dzevana and the lyk. “Ehe mainin sounds good” vakadaro bamukuru apa ndai delaya tym kuti madhoni arare.
Bamukuru ndagara ndaivachiva kubva kare coz vari tall zvepakati nepakati vari giant rume chairo rakasvika sembatatisi asi kwete zvekufutunuka kuita chibhaluma aiwa asi zviri seductive chaizvo. So all the tym ndainyatsoti ya bamukuru ndoda kumboinzwa chete hameno kuti kupi kana rinhi.” Sean, Taku vatorara kare?” regai ndinovararisa” ndakadaro ndichisimudza one by one ndichinovararisa ku bedroom kwavo.
Ndakapnda mu sitting manga muina bamukuru vakati “ndonzwawo hope regai ndinorara”. Nechemumwoyo ndikati hindah makatsva ma fuse kudaro hamuoni kuti nhas ndiro zuva redu? “aah ko wy so early mangwana i weekend hamusi kuenda kubasa chimbotandarai regai ndiise movie tione ndimbonopinda mu shower will come and join u”.
Ndakadaro ndichienda kunogeza kuitira bamukuru vanyatsosvira pakachena kkk. Ndiri mushower kudaro, ndakambobatwa nekapfungwa kekuti ko zvandirikuda kuti zviitike zvikaramba, ko vakajamuka vakazoudza sisi kahana kakamborova asi ndakazvishingisa ndikati ndofira mugiya sebhasikoro ndinombonzi ani ini mwana wamuhera ndakaumbwa musiki achida and matako ndakaita se ekuramwirwa.
Ndapedza ndakabva ndapfeka ka nyt kanoonesa zvemukati ndichibva ndasunga towel pamusoro( kuti ndisabve ndamhanya kupinda ndiri nude) Ndakapnda mu sitting wanike shasha yondiyeva se mhembwe iri kuyeverwa nemavara e shato “kwakanaka here ndakadaro ndichigara paside navo” “nothing” vakadaro vachidzora maziso avo.
Ndakabva ndasimuka ndikabvisa towel randanga ndakamonera ndikagara pamakumbo avo ndakavatarisa. “Aaah m-aa-inin ko-oo ndeyipi ko yamakutamba” vakadaro vachikakamira. Ndakatanga kuvakisser ndoita sendisina kunzwa zvavataura wanike vaku respondawo ndikati zvangu zvaita. Vakatanga kuyamwa ma nipples angu rimwe ruoko ruchipinda mu nyt semunhu anga aine tsoro yake ndakanga ndisina pant ndakanga ndatotota kare.
Takabva taita zvekusimuka vachibvisa t- shirt uku ndichibvisawo trouse apa sekuru vakanga vachiti twi kumira se Jinda raMambo yakasimba ino dema ine tsinga nechemumoyo ndikati iyi ndiyo inonzi mboro ichanyatsondi gutsa. Ndakabva ndaiti mukanwa bvo ndikatanga kuidya ndichipuruzira machende ” Oh Tee babie “.
Vakadaro vazipirwa uku vachinyatso bata msoro wangu kuti ndinyatso idye. Vakabva vaita zvekundimhidzura kunge kapepa chaiko vachindirarisa pasofa kwakuiti pfe mubeche rangu ranga ronzwa zvaro nekuda kukwirwa. Ndakanyatso vhura makumbo ese kuti vanyatsopnda “ohh my gosh fck me Joe shhhhhhhh auuuu” ndakachemerera ndonzwa mboro ichisvika kuchibereko chaiko ndakabva ndatotunda ndakanzwa shasha yoshinyira ichiti am coming ndikati nyatsotundai baba
Ndakazongonzwa vakuti babe u ar sweet vachindi kisser. Takaita all styles manheru iyayo ko chekumhanyira pakanga pasina sisi vaidzoka Nesunday yacho. Kubva musi uyu tikawana kamukana tinosvirana chete.
Next story Makwiriro andakazoita kaTeacher ke Maths
Previous story Kushandira Maid, madhamu vakafa zvavo nehope!